Miaiky ny Fitsarana any Korea Atsimo fa Manan-jo Tsy Hanao Miaramila ny Olona
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky
Anisan’ireo Vavolombelona 140 nolazain’ny MMAO fa mpikomy i Gyeong-chan Park
9 JONA 2017
Nisy olona voantso ho miaramila tany Korea Atsimo, nefa tsy nanaiky satria tsy mety amin’ny feon’ny fieritreretany izany. Navoakan’ny Sampan-draharaha Miandraikitra ny Fiantsoana ho Miaramila (MMAO), tao amin’ny tranonkalany, àry hoe iza avy ireo olona ireo mba ho hitan’ny besinimaro. Nolazainy koa hoe mikomy tsy mety hanao miaramila izy ireo. Nilaza anefa ny fitsarana any Séoul miandraikitra ny ady amin’ny fanjakana, tamin’ny 1 Mey 2017, hoe mety hisy vokany ratsy be amin’ireo olona ireo izany sady manala baraka azy ireo. Nilaza koa ilay fitsarana fa nisy nametraka fitoriana tany aminy hoe tsy nety ny nataon’ny MMAO. Tsy navelan’ilay fitsarana hamoaka ny anaran’izy ireo intsony àry aloha ny MMAO mandra-pivoakan’ny valin’ilay fitoriana. Nanaiky hanao an’izany ny MMAO.
Tsy mpikomy izy ireo
Nampandre an’ireo olona tsy mety hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany ny MMAO, tany am-piandohan’ny taona 2015, fa hampahafantariny amin’ny besinimaro ny mombamomba azy ireo sady holazainy hoe mpikomy izy ireo. Fantatry ny MMAO tsara hoe iza avy ireo olona ireo, satria nanoratra tany izy ireo hoe tsy hanao miaramila fa vonona hanao asa tsy misy ifandraisany amin’ny miaramila. Navoakan’ny MMAO tao amin’ny tranonkalany anefa ny mombamomba an’ireo olona ireo tamin’ny 20 Desambra 2016 mba ho hitan’ny besinimaro. Nasehony tao, ohatra, ny anarany sy ny taonany ary ny adiresiny. Nolazainy koa hoe mpikomy izy ireo.
Anaran’olona 237 no navoakan’ny MMAO, ka anisan’izany i Gyeong-chan Park. Vavolombelon’i Jehovah izy ary tsy manaiky hanao miaramila satria tsy mety amin’ny feon’ny fieritreretany izany. Gaga be izy rehefa nahita ny anarany teo amin’ilay lisitra. Nilaza izy hoe: “Efa fantatro hoe tsy maintsy hisy hanaratsy ahy satria tsy mety amin’ny feon’ny fieritreretako ilay hoe hanao miaramila. Nalahelo be anefa aho hoe lazain’ny fanjakana fa ‘mpikomy.’ Fantatry ny MMAO tsara ny Vavolombelon’i Jehovah, sady fantany ny antony mahatonga anay hiteny hoe tsy mety amin’ny feon’ny fieritreretanay ny hanao miaramila. Tsy hoe kamo hanao adidy eo amin’ny fiaraha-monina akory izahay.” Hoy koa izy: “Vao nahita ny anarako sy ny adiresiko tao amin’ilay lisitra aho, dia natahotra hoe hisy olona ho tonga any an-tranoko dia hila ady amiko.”
Nisy 140 ny Vavolombelona tao amin’ilay lisitra, ary nangataka izy ireo hoe tsy havoaka ao amin’ilay tranonkala ny anarany. Nohazavain’izy ireo tao amin’ilay fangatahana fa ny atao hoe mpikomy dia ireo tsy manaiky hanao miaramila nefa “tsy manome antony marim-pototra”, araka ny voalazan’ny Lalàna Momba ny Raharaha Miaramila. Nilaza ireo Vavolombelona ireo fa tsy mikomy mihitsy izy ireo sady tena ‘nanome antony marim-pototra.’ Manan-jo tsy hanao miaramila mantsy ny olona raha tsy mety amin’ny feon’ny fieritreretany izany, rehefa jerena ny lalàna any Korea Atsimo sy ny lalàna iraisam-pirenena. Efa nangatahina tany amin’ny Fitsarana Momba ny Lalàm-panorenana any Korea Atsimo hoe tokony mba hanaja an’izany ny fitondrana any, ary mbola andrasana ny valiny hatramin’izao.
Vao mainka mijaly ny Vavolombelon’i Jehovah noho ny nataon’ny MMAO
Niezaka nanaratsy an’ireo Vavolombelona ny MMAO mba hahatonga ny fiaraha-monina hanakiana azy ireo. Miady saina sy mahatsiaro ho afa-baraka àry izy ireo, nefa tsy nampiova hevitra azy ireo mihitsy izany. Mbola tsy mety manao miaramila ihany izy ireo. Vavolombelon’i Jehovah 19 000 mahery any Korea Atsimo no efa nogadraina satria tsy nety nanao miaramila. Raha atambatra ny fotoana nigadran’izy ireo tato anatin’ny 60 taona farany, dia mahatratra 36 000 taona mahery. Nilaza ireo Vavolombelona hoe tafahoatra loatra ny atao amin-dry zareo satria efa gadraina izy ireo noho izy te hanaja ny feon’ny fieritreretany, nefa mbola alam-baraka koa.
‘Rehefa nandinika an’ilay raharaha sy nihaino ny fanazavana rehetra ny Fitsarana, dia matahotra sao tsy ho azo arenina intsony ny voka-dratsin’ny zavatra nataon’ny MMAO. Tsy tokony hamoaka anaran’olona ao amin’ny tranonkalany intsony àry ny MMAO, satria hampidi-doza an’ilay olona izany. Tsy hisy vokany ratsy be amin’ny fiaraha-monina koa na tsy atao fantatr’olona aza ireo anarana ireo. Namoaka didy àry ny Fitsarana fa [hajanona kely aloha ny famoahana anaran’olona].’—Fitsarana any Séoul Mitsara ny Ady Amin’ny Fanjakana, Filan-kevitra Fahenina, Didim-pitsarana Tamin’ny 1 Mey 2017.
Manantena ny hahazo rariny izy ireo
Faly ny Vavolombelon’i Jehovah any Korea Atsimo satria niaiky ny fitsarana any fa tsy nanaja ny zon’olombelona ny MMAO. Manantena àry ny Vavolombelona fa hisy vokany tsara izany rehefa handinika an’ilay raharaha ny fitsarana. Hasain’ireo Vavolombelona hilaza ny heviny momba an’ilay raharaha koa ny Vaomiera Miaro ny Zon’olombelona any Korea Atsimo. Amin’ny 28 Jona 2017 no hatao ilay fitsarana.
Fantatra eran-tany fa tsy mandeha miady ny Vavolombelon’i Jehovah. Nahoana?